इन्द्रप्रस्थ (इंद्रदेव का शहर) (Pali: इंद्रप्रस्थ, संस्कृत: इन्द्रेप्रस्था ), प्राचीन भारतको राज्यहरू मध्ये एक थियो। महान भारतीय महाकाव्य महाभारतको अनुसार यो पाण्डवहरूको राजधानी थियो। यो सहर यमुना नदीको किनारामा अवस्थित थियो, जो कि भारतको वर्तमान राजधानी दिल्लीमा स्थित छ।
सहरको निर्माण[सम्पादन गर्ने]
महाभारत (पुस्तक १, अध्याय २०९)मा यस सहरको विवरण दिएको छ, कि कसरी पाण्डवहरूले यो सहर बनाए र बसाए।
कृष्ण र अर्जुन द्वारा एक अग्लो टीलेबाट इंद्रप्रस्थ शहरको विहंगम दृश्य
पाण्डवको पांचाल राजा द्रूपदको छोरी द्रौपदीसँग विवाह उपरांत मित्रता भएपछी उनीहरू धेरै नै शक्तिशाली भएका थिए। त्यसपछी हस्तिनापुरको महाराज धृष्टराष्ट्रले उनीहरूलाई राज्यमा बोलाए। धृष्टराष्ट्रले युधिष्ठिर लाई संबोधित गर्दै भने, “ हे कुंती पुत्र!आफ्नो भ्राताहरूसँग जो म भन्छु, सुन। तिमीहरू खांडवप्रस्थको वनलाई हटाएर आफ्नो लागि एक सहर निर्माण गर, जसबाट तिमीहरू र मेरा छोराहरूमा कुनै अन्तर रहोस। यदि तिमीहरू आफ्नो स्थानमा रहन्छौ, त्यसपछी तिमीहरूलाई कसैले पनि क्षति पुरयाउन सक्दैन। पार्थ द्वारा रक्षित तिमीहरू खांडवप्रस्थमा निवास गर, र आधा राज्य भोग।“
धृतराष्ट्रको कथनानुसार,पाण्डवहरूले हस्तिनापुरबाट प्रस्थान गरे। आधे राज्यको आश्वासनको साथ उनीहरूले खांडवप्रस्थको वनहरूलाई हटाई दिए। त्यस उपरांत पाण्डवहरूले श्रीकृष्णको साथ मय दानवको सहायताबाट त्यस सहरको सौन्दर्यीकरण गरे। त्यो सहर एक द्वितीय स्वर्गको समान भयो। त्यसपछी सबै महारथिहरू र राज्यहरूको प्रतिनिधिहरू लाई उपस्थितिमा त्यहा श्रीकृष्ण द्वैपायन व्यासको सान्निध्यमा एक महान यज्ञ र गृहप्रवेश अनुष्ठान का आयोजन भयो। त्यसपछी, सागर जस्तो चौडा गहिराईबाट घिराएको, स्वर्ग गगनचुम्बी चहारदीवारीबाट घेरीएको र चंद्रमा वा सूखा मेघ जैस्तो श्वेत यो नगर नागहरूको राजधानी, भोगवती नगर जस्तो लाग्न लगो। यसमा अनगिन्ती प्रासाद, असंख्य द्वार थियो, जो प्रत्येक द्वार गरुडको विशाल फैलिएको पंखा तरह खुला थियो। यस सहरको रक्षा पर्खालमा मंदराचल पर्वत जस्ता विशाल द्वार थिए। यो शस्त्रहरूबाट सुसज्जित, सुरक्षित नगरीलाई दुश्मनहरूको एक बाण पनि खरौंच सम्म गर्न सक्दैन्थ्यो। त्यसको पर्खालमा तोप र शतघ्नियां राखीएको थियो, जस्तो दुईमुखे सर्प हुदछ। बुर्जाहरूमा सशस्त्र सेनाको सैनिक लागेका थिए। ति पर्खालहरूमा वृहत फलाम चक्र पनि लागेका थिए।
यहाँको सडकहरू चौडा र सफा थिए। त्यसमा दुर्घटनाको कुनै भय थिएन। भव्य महलहरू, अट्टालिकाहरू र प्रासादहरूबाट सुसज्जित यो नगरी इंद्रलाई अमरावतीसँग मुकाबला गर्नु थियो। यस कारण नै यस इंद्रप्रस्थ नाम दिइएको थियो। यो शहरको सर्वश्रेष्ठ भागमा पाण्डवहरूको महल रहेको थियो। यसमा कुबेरको जति नै खजाना र भण्डार थियो। यति वैभवबाट परिपूर्ण यसलाई देखेर दामिनीको समान आँखा चम्किन्थ्यो।
“जब सहर बस्यो, तब त्यहा ठूलो संख्यामा ब्राह्मण आए, जसको साथ सबै वेद-शास्त्र इत्यादि थिए, उनीहरू सबै भाषाहरूमा पारंगत थिए। यहाँ सबै दिशाहरूबाट धेरै व्यापारीगण आए। उनीहरूलाई यहाँ व्यापार गरेर द्न सम्पत्ति पाउने आशा थियो। धेरै कालिगढ वर्गको मानिसहरू पनि यहाँ आएर बसे। यस शहरलाई घेरेको थियो, थुप्रै सुंदर उद्यान थिए, जसमा असंख्य प्रजातिहरूको फल र फूल इत्यादि लागेका। यसमा आम्र, अमरतक, कदंब अशोक, चंपक, पुन्नग, नाग, लकुचा, पनास, सालस र तालसको वृक्ष थिए। तमाल, वकुल र केतकीको सुगन्धित रुख थिए। सुंदर र पुष्पित अमलक, जसको शाखाहरू फलहरूबाट लादिएको कारण झुकी रहन्थ्यो। लोध्र र सुंदर अङ्कोल वृक्ष पनि थिए। जम्बू, पाटल, कुंजक, अतिमुक्ता, करविरस, पारिजात र धेरै अन्य प्रकारको रुख बिरुवा लागेका थिए। अनेकौ हरा भरा कुञ्ज यहाँ मयूर र कोकिल ध्वनिहरूबाट गुन्जि रहन्थ्यो। थुप्रै विलासगृह थिए, जो कि शीशे जस्ता चमकदार थिए, र लताहरूबाट ढाकिएको थियो। यहाँ थुप्रै कृत्रिम टीले थियो, र जलबाट माथिसम्म भरिएको सरोवर र तालहरू, कमल तडाग जस हंस र बत्तखें, चक्रवाक इत्यादि किल्लोल गर्दथे। यहाँ थुप्रै सरोवरहरूमा धेरै जलीय बिरुवाहरू पनि पनि भरमार थिए। यहाँ रहेर, सहरलाई भोगेर, पाण्डवको खुशी दिनदिनै बढदै गएको थियो।
भीष्म पितामह र धृतराष्ट्रको आफुहरू प्रति दर्शित नैतिक व्यवहारको परिणामस्वरूप पाण्डवहरूले खांडवप्रस्थलाई इंद्रप्रस्थमा परिवर्तित गरिदिए। पाँच पाण्डवहरू संग, Thus in consequence of the virtuous behaviour of Bhishma and king Dhritarashtra towards them, the Pandavas took up their abode in Khandavaprastha. Adorned with those five mighty warriors, each equal unto Indra himself, that foremost of cities looked like Bhogavati adorned with the Nagas.
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=इन्द्रप्रस्थ&oldid=1028753" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १५:२३, २२ जुलाई २०२१ मा परिवर्तन गरिएको थियो।